Saameynada Liddiga ah ee Daaweynta Kansarka
Author Topic: Saameynada Liddiga ah ee Daaweynta Kansarka (Read 11369 times)
« on: December 19, 2008, 06:23:44 PM »
Daaweynta kansasrka, sida shucaaca ama kiimiko ku daaweynta, waxaa loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo unugyada kansarka ee jirka ku jira. Unugyada kansarku waxay u koraan una qaybsamaan si ka deg deg badan sida unugyada caafimaadka qaba.
Daaweynta kansarka waxaa loo sameeyaa si ay uga shaqayso unugyadaan sida deg degta ah u koraya. Shucaac iyo kiimiko ku daaweyntu waxay saameyn karaan unugyada caafimaadka qaba, ee sida deg degta ah u koraya iyagoo sababaya saameyn lid ku ah.
Dadka badankoodu waxay la kulmaan waxoogaa saameyn lid ah. Saameyntaan liddiga ah iyo sida ay u daran tahay waxay ku xiran tahay daaweyntaada iyo sida jirkaagu uu uga jawaabo. Kuwa ugu badan waxaa ka mid ah:
# Shuban ama saxaro adayg
# Lur ama xanuun afka, cirridka iyo cunaha ah
# Lalabbo ama matagid
# Timaha oo kaa bida oo loo yaqaanno "alopecia"
# Dhibaatooyinka maqaarka iyo ciddiyaha ah oo ay ku jiraan finiinicyo, guduudasho, cun-cun, maqaarka oo fiiqma, engegnaan, canbaar ama qorraxda oo qofka aad u dhibta
# Diiqo ama caabuqid dareemid
Saameynt liddiga ah ee dhiigga waxaa ka mid ah:
# Unugyada dhiigga ee cas-cas oo aad u yaraada oo loo yaqaanno dhiig yari.
# Unugyada jirka oo aan heleynin ogsijiin ku filan.
# Unugyada dhiigga ee cad-cad oo aad u yaraada loona yaqaanno "neutropenia". Tani waxay jirka ku adkaysaa in uu la dagaallamo jeermisyada.
# Unugyada dhiig xinjirowga sameeya oo aad u yaraada. Tani waxay jirka ka dhigtaa mid u nugul nabarrada aan dillaacin iyo dhiig bixidda.
Takhtarkaaga la hadal si aad ula socodsiiso sida aad dareemeyso inta daaweyntaada kansarku ay socoto.
Haddii aad wax su'aal ama walaac ah qabtid, halkaan ka weydii
Views: 17346 November 20, 2018, 03:32:30 PM
Views: 12925 November 17, 2007, 01:43:21 PM
Views: 15312 December 12, 2008, 11:56:31 AM
Started by BadriyaBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 6733 October 02, 2010, 08:29:24 AM
Su'aal: Sidee lagu ogaadaa cudurka kansarka?
Views: 31655 March 02, 2013, 07:32:35 PM